पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँदै बन्दीपुरको घरबास – Everest Dainik – News from Nepal
पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउँदै बन्दीपुरको घरबास
बन्दीपुरमा २०६८ सालमा स्थापित घरबासले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुगेको होमस्टे समितिका संस्थापक अध्यक्ष राजु बानियाँले बताए ।
“घरबासमार्फत् आत्मनिर्भर बन्न र पर्यटकीय गतिविधिसमेत बढाउन योगदान पुगेको छ”, उनले भने । बन्दीपुर गाउँपालिका प्रमुख पूर्णसिं थापाले यहाँ सञ्चालित घरबासको प्रवद्र्धनमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने बताए । “होमस्टे बन्दीपुरको चिनारी बनिसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको प्रवद्र्धनका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ ।”
हाल बन्दीपुरमा २० घरमा घरबास सञ्चालन छ । सरकारीस्तरबाट कुनै सहयोग नभएपछि स्थानीयवासीले आफ्नै पहलमा शुरु गरेका थिए । पारिवारिक, शान्त वातावरण र सुलभ मूल्यमा बस्न पाउने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक होटलमा भन्दा घरबासमा बस्न रुचाउने गरेको होमस्टे व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष दिलकुमारी रानाले बताए ।
यहाँका घरबासमा एकैचोटी १०० जनासम्म बस्न मिल्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार होमस्टेमा अर्गानिक खानाको मात्रै प्रयोग गरिनेछ भने वास बस्ने पर्यटकले रु ६५० शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसमा बेलुकाको खाजा, खाना, बिहानको नास्ता समावेश छ ।
घरबासमा बस्ने पर्यटकलाई परिवारको जस्तै व्यवहार गरिने भएकाले उनीहरु खुशी भएर फर्कने गरेको अध्यक्ष थापाले बताए ।
“होटलमा बस्दा स्वागत र आत्मीयता हुँदैन”, उनले भने, “तर घरबासमा बस्ने पर्यटकलाई परिवारजस्तो व्यवहार गर्छौं ।” घरबासमा बस्ने पर्यटकलाई व्यवसायीले लाखे, लोकदोहोरी, चुड्कालगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत देखाउने गरेका छन् । रासस
ट्याग्स: nepal tourism board
इस्टर्न रिजन कप: थाइल्याण्डमा नेपाली क्रिकेट टिमको कडा अभ्यास (फोटोफिचर)
घुससहित वडा सचिव कार्यकक्षबाट रंगेहात पक्राउ !
विश्वप्रकाशको ओलीलाई सुझाव– कृपया बाँस्कोटाको प्रवक्ता नबनिदिनोस् !
ढुंगाले लागेर कांग्रेस वडा सभापतिको मृत्यु
सचिवालयको निर्णय सर्वसम्मत हो, प्रधानमन्त्रीले मान्नैपर्छः प्रचण्ड